श्वेता खड्का : रोजे जस्तो हुन्न जीवन - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ कला ∕ श्वेता खड्का : रोजे जस्तो हुन्न जीवन
Sindhu Khabar शनिबार, २०७८ असोज ९ / १५:४२
पीडाहरु बटुलेर, रोही रहुँ जस्तो लाग्छ
खुसीहरु समेटेर, हाँसी रहुँ जस्तो लाग्छ
आँशु-आँशु हुन्न जीवन
खुसी-खुसी हुन्न जीवन
भेट्यो जस्तै उस्तै हुन्छ,
श्वेता खड्का के बन्न चाहन्थिन् ? अतितलाई फर्केर हेर्दा उनलाई यही प्रश्नले विथोल्छ । बुवा भन्थे, ‘आर्मी अफिसर बन्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नै मनलाई सोधिन् । र, जवाफ त्यही पाइन् । अर्थात आर्मी अफिसर ।
तगडा थिइन् । निर्भिक थिइन् । जुझारु थिइन् । अनि जिद्दी पनि ।
फुटबलमा रुची राख्थिन् । तेक्वान्दो सिक्थिन् । भलिबल खेल्थिन् । ‘ब्वाईज कट’ कपाल । त्यसमाथि केटाकै जस्तो पहिरन शैली । स्वभाव र रुपरंगले संकेत गथ्र्यो, तिम्रो भविष्य फौजीमा छ । अर्कोतिर बुवा ब्रिटिश आर्मी । श्वेता आर्मी बन्ने दौडमा लागिन् । दौड, हेभिङ, सेटअपसँगै उनको दैनिकी सुरु हुन्थ्यो ।
तर, श्वेता आर्मी बनिनन् ।
उमेरको रंग चढ्दै गएपछि दौतरीहरु भन्ने गर्थे, ‘यो त हिरोइन जस्तै छे ।’ अभिनेत्री मिथिला शर्मा साख्खै फुपू । पनौती, खोपासी टोलबाट फुपूको घर (काठमाडौं) आउजाउ भइरहने । मिथिला भन्थिन्, ‘यसको त आँखा कति राम्रो, हिरोइन बन्छे होला ।’
अन्ततः समयले उनलाई त्यही मोडमा उभ्याइदियो, जसमा उनको कुनै सपना थिएन । उनी हिरोइन बनिन् । त्यो एक अनपेक्षित घटना थियो ।
घटना यस्तो थियो ।
आर्मी बन्नकै लागि उनी दौडन्थिन्, व्यायाम गर्थिन् । एकदिन फुपू मिथिला शर्माले भनिन्, ‘फिटनेशका लागि किन दशथरी गर्नुपर्‍यो, नृत्य गर ।’ नृत्यले शरीरको समूचित व्यायाम हुन्छ भन्ने उनको बुझाई रहेछ । फुपूकै सुझाव सिरोधर गर्दै उनी नृत्य सिक्न गइन् ।
उनी जुन इन्स्टिच्युटमा नृत्य प्रशिक्षणको लागि भर्ना भइन्, त्यो बसन्त श्रेष्ठको थियो । उनी नृत्य सिक्न थालिन् । तर, नृत्त्यांगना बन्न होइन बरु शारीरिक फिटनेशका लागि । किनकी भविष्यमा आर्मी जो बन्नुछ ।
एकदिन फोन आयो, बसन्त श्रेष्ठको । त्यसदिन घरमा सत्यनारायणको पूजा थियो । उनी घरमै बसेकी थिइन् । बसन्त श्रेष्ठले उनलाई ‘इन्स्िटच्युटमा आउनु, एकछिन काम छ’ भने ।
उनी इन्स्टिच्युट पुगिन् । त्यहाँ अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र निर्देशक शिव रेग्मीसँग उनको साक्षतकार भयो । टेलिभिजन र सिनेमाको पर्दामा मात्र देखिएका अनुहार प्रत्यक्ष देख्दा उनी केही नर्भस भइन् ।
उनीहरु नयाँ सिनेमाका लागि हिरोइनको खोजीमा रहेछन् । फिल्म थियो, कहाँ भेटिएला ।
घरमा उनले परिवारजनलाई सुनाए, ‘मलाई हिरोइनको लागि अफर आएको छ ।’ तर, कसैले पत्याए पो ! न त छोरीलाई हिरोइन बनेको हेर्न चाहन्थे बुवाआमा ।
किनभने उनीहरु त छोरीको भविष्य सुनिश्चित गरिदिन चाहन्थे । छोरीलाई सेकेन्ड लेफि्टनेन्ट बनाउन चाहन्थे ।
तर, श्वेताले बाटो मोडिन् । उनी हिरोइन बनिन् । चलचित्र बन्यो । धुमधामका साथ चल्यो । श्वेताको चर्चा चुलियो ।
एकातिर फिल्मी करियरको सुखद सुरुवात भइसकेको थियो भने अर्कोतिर प्रेम-भावना पनि अंकुराउँदै थियो । पहिलो फिल्मपछि अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँगको प्रेमको विजारोपण भइसकेको थियो ।
अन्ततः लामो प्रेम-सम्बन्धलाई उनीहरुले विवाहमा रुपान्तरण गरे । अब उनीहरु आफ्नो छुटै पारिवारिक रचना गर्दै थिए । तर, यो सुखमय क्षण आउन पाएन । श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भयो ।
यसबेलासम्म उनीहरुले ‘कोहिनुर’ फिल्म निर्माण गरिसकेका थिए । यो फिल्म ब्लकबस्टर रह्यो । जबकि यो खुसी साट्नका लागि श्वेतासँग श्रीकृष्ण थिएनन् । बरु, उनको जीवनमा भयानक तुफान माडारिदै थियो ।
उनको जीवनमा अँध्यारो छाउदै थियो ।
पीडाहरु बटुलेर, रोइरहुँ जस्तो लाग्छ
विवाहपछि उनीहरुले कुनै सुखद पल साट्न पाएनन् । आखिर पारिवारिक जीवनको सुरुवात हुन नपाई उनको सिउँदो पुछियो । अब श्वेताको भागमा दुःखै दुःख थियो । उनी शिथिल थिइन् । कमजोर थिइन् । भोक थिएन, निद्रा थिएन । मनमा चैन थिएन ।
अन्ततः उनको शरीर पनि गल्न थाल्यो । पाठेघरमा फंगस यिस्टको समस्या भयो । त्यसको उपचार नसक्दै अर्को रोग थपियो, बोन टिबी । श्रीकृष्णलाई बोन क्यान्सर भएको थियो । श्वेताले आफुलाई पनि त्यस्तै भएको हो कि भनी शंका गरे । यस्तै पीर र चिन्ताहरुले उनलाई डिप्रेसनको रोगी बनायो ।
अनेकथरी रोगले एकमुष्ठ च्यापेपछि उनलाई बाँच्ने रहर लाग्न छाड्यो ।
दुःखहरु छिचोल्दै उनी जाग्न खोजिन, बाँच्न खोजिन् । हाँस्ने बाहाना खोजिन्, रमाउने चाहना गरिन् । आखिर ती तमाम पीडाहरुलाई जितेर उनले नयाँ जीवन बाँच्ने प्रण गरिन् । र, रमझम, साथीभाई, भेटघाटमा आफुलाई व्यस्त बनाइन् ।
आफ्नै पीडा समेटेर सिनेमा बनाइन्, कान्छी । त्यससँगै उनले व्यापार-व्यवासायमा आफुलाई लगाइन् । यस कामले उनलाई विगतका पीडाहरुबाट मुक्त गराउँदै लग्यो । उनले सोचिन्, जीवन अझै बाँकी छ । दुःखहरु सहनुपर्छ, सुखका दिनले पर्खिरहेका हुन्छन् । उनलाई यस्तै लाग्यो ।